သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Blog ထဲသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများ ထည့်ရအောင်
စံလင်းဖြိုး on November 26, 2008 at 2:32 AM said...
အစ်ကို. ကျွန်တော်.အစ်ကို. ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဆရာလဲတင်ပါတယ်အစ်ကို
ကျွန်တော်.လဲဘလော.ရေးပါတယ် ။ ကျွန်တော်မသိတာလေးများလဲမေးပါရစေနော်အစ်ကို